UZinnbauer uwubona uzobavezela izinga labo oweSundowns - Impempe
UZinnbauer uwubona uzobavezela izinga labo oweSundowns
OKabelo Dlamini noGabadinho Mhango be-Orlando Pirates
Isisho esidala sezemidlalo sithi ukuze ube sezingeni eliphezulu, kumele uqhathwe nabasezingeni eliphezulu, kanti yiso esibusa umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer kulezi zinsuku.
Phela lo mqeqeshi ulungiselela iqembu lakhe umdlalo omkhulu nonzima kwiNedbank Cup la bezobhekana khona neMamelodi Sundowns ebhuquzisa kwasani ephambi kwayo kule sizini.
“Akuthina esibhekiwe ukuwina lo mdlalo,” kuvuma uZinnbauer. “Uma sizoba neqiniso nje sizodlala neqembu eliphambili ezweni njengamanje.
“Akulula ngoba la ngihamba khona abalandeli bayagcizelela ukuthi kumele siyiwine iNedbank Cup. Uma ungumqeqeshi uhlezi ufuna ukuwina izicoco, kodwa siyazi ngeke sivele sifise bese kwenzeka, kumele sisebenze kanzima.
“KwiPirates abalandeli nabaphathi bahlezi bebheke ukuthi uwine izicoco,” kuqhuba lo mqeqeshi odabuka eGermany.
Uthe indlela izinto ezihlelwe ngayo eqenjini yiyo eyenza kube nesidingo sokuwina zonke izicoco iqembu elidlala kuzo.
“Likhulu leli qembu, lihleleke kahle, nosihlalo unezifiso ezinkulu. Ngizozama okusemandleni njengomqeqeshi ukuwunqoba lo mdlalo olandelayo, okulandela lapho owandulela owamanqamu.
“Ngakho singawuwina lo mqhudelwano… kodwa kumele sibhekane nomdlalo ngamunye,” kucacisa yena.
“Indlela yokuzihlola ukuthi sesilaphi ngokwezinga wukuthi sibhekane neqembu eliphambili kwiligi, iqembu leChampions League. Kumele sinqobe, uma sihlulwa siyaphuma, uma siwina siyajabula, ngeke silahlekelwe lutho.”
Cishe into eqinisa lonmqeqeshi idolo wukuthi abagadli bakhe ababili, oGabadinho Mhango noTshegofatso Mabasa sebeluleme futhi bayabuyela kancane kancane efomini yabo kanti lo mdlalo ungase ube yithuba lokuthi baziveze.
Previous Previous post: UBabar ushaye into yomhlaba iPakistan ibhaxabula amaProteas
Next Next post: Usafuna ukuhlala kwiChiefs ‘uMadala’